गरीब स्वयं छवि? तपाईंको विश्वासलाई चुनौती दिनुहोस्, आफैलाई होइन - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट Judy | अगस्ट 19, 2018 | सकारात्मक सोच, आत्म-सुधार | 1 |
कमजोर आत्म छवि भएका व्यक्तिहरू आफैंको नकारात्मक विश्वास प्रणालीलाई स्वीकार्छन जुन उनीहरूलाई चुनौती दिनको लागि एकदमै कलिलो उमेरमा थपिएको थियो।
केही सकारात्मक विश्वासहरू एकैसाथ रोपिएका थिए, तर कुनै प्रकारले यो नकारात्मक भयो जुन हरायो।
नकारात्मक विश्वास तब अनुभव द्वारा प्रबलित हुन्छन्, र तीनिहरु प्रलोभनकारी पनि हुन सक्छन किनकि उनीहरु सजीलो विकल्पहरु लिन को लागी एक बहाना प्रदान गर्छन्। जबकि केहि देखिने सकारात्मक विश्वास प्राय: सहयोगीको साथ एक सेटको साथ जान्छ।
तिनीहरू केवल वास्तविकताका लागि साना बच्चाहरूका लागि हुन्। भनिन्छ तपाईं हुनुहुन्छ soooo प्यारा र हास्यास्पद सीमित प्रयोगको हो जब तपाई 30 मा हिर्काउनुहुन्छ र नयाँ जागिर पाउन संख्या संख्या परीक्षण गर्नुपर्दछ। "म गणितमा बेकार छु!" भन्ने गुनासोले मात्र यसलाई काटदैन।
तपाईं एक गरीब आत्म छवि को बारे मा के गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं आफ्नो रिफ्लेक्स धारणाहरूलाई चुनौती दिन आफैलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। मानवसँग सोच्ने दुई तरिकाहरू छन् - फास्ट ट्र्याक, र रिफ्लेक्टेड।
मस्तिष्कका विभिन्न क्षेत्रहरू संलग्न छन्। द्रुत ट्र्याक सोचमा भर पर्नाले तपाइँलाई हानी पुर्‍याउने र आत्म-हानि गर्ने व्यवहारको लागि कमजोर बनाउँछ।
यसले तपाईंको सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्दछ, किनकि तपाईंको परिस्थितिहरूमा गलत धारणाहरू तपाईंको वरिपरिका सबैलाई असर गर्दछ।
एक व्यावहारिक स्थितिमा हामी सबै द्रुत ट्रयाक सोच पहिले प्रयोग गर्छौं, किनकि यो एक यस्तो प्रतिक्रया हो जसले हामीलाई बिहानको समयदेखि नै आपतकालिन अवस्थामा जीवित राख्यो। यदि तपाईंको आत्म छवि कमजोर छ, तपाईं सबैभन्दा नराम्रो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ र सोही अनुरूप प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। (उदाहरणका लागि "तिनीहरूले मलाई उद्देश्यको लागि पर्खिरहे! मेरो अपमान भइरहेको छ!")
यदि तपाईं यस धारणामा कार्य गर्नुहुन्छ भने, जागरणको सतह मुनि तैरिने विश्वास - हिमशिलाहरू जस्ता - तपाईंलाई शासन गर्दैछन्। तपाईं overreact हुन सक्छ। यदि तपाईं यस धारणालाई चुनौती दिनुहुन्छ कि तपाईंको अनादर भइरहेको छ, तपाईं आफ्नो चिंतनशील दिमागलाई काममा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। मानौं "ती" लाई भर्खर तपाईंले महसुस गर्नुभएन कि तपाईं लाममा हुनुहुन्छ?
आफैलाई सोध्नुहोस् ... के यो वास्तविक हो?
यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवतः उर्जा खेर फाल्नुहुन्छ तपाईं प्रसन्न र सफल हुनको लागि आवश्यक छ। यसले तपाईंलाई साथमा रहन र काम गर्न तनावपूर्ण बनाउँदछ। त्यसोभए तपाईको आत्म छवि कमजोर हुन सक्छ।
तपाईंको विश्वासलाई चुनौती दिन सिक्नुहोस् कि प्रत्येक पटक केही गलत भयो भने यो संसारको अन्त्य हो। यो प्राय वास्तविकतामा आधारित हुँदैन, र यदि कसैले तपाइँलाई यो हो भनेर बताउन कोशिस गर्दछ भने, त्यसोभए तपाईं सायद उनीहरूको सुविधाको लागि हेरफेर गर्दै हुनुहुन्छ।
यो एक मानसिक बानीसँग सम्बन्धित छ जुन "Terribilizing" भनिन्छ।
इमान्दारीपूर्वक यदि तपाईले एक साथीलाई "होईन" राम्रोसँग भन्यो भने त्यो कत्ति डरलाग्दो हुनेछ। वा ढिला आइपुगेर समाप्त भयो? यस्तो भयावह हुनबाट रोक्नको लागि तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईको नकारात्मक विश्वासलाई चुनौती दिन एउटा प्रविधि छ। यो मात्र होईन तपाईंले कार्य गर्नु भन्दा पहिले सोच्नुहोस्, त्यो राम्रो छ। यो हो तपाइँ पुन: कार्य अघि विचार गर्नुहोस्, जहाँ RE वास्तविकता को लागी RE छोटो छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक विश्वास गरी फिर्ता आयोजित गरीन्छ भने गणित संग बेकार, आफैलाई सोध्नुहोस्:
म कसरी कहिल्यै debtण मा फस्न छैन, वा गलत आकार को कपडा किन्?
म कती राम्रो हुन आवश्यक छ, र कसले मलाई पर्याप्त राम्रो हुन मद्दत गर्दछ?
यदि वास्तवमा एक छ भने अन्तर्निहित समस्या तपाईंलाई विशेष मद्दत चाहिन्छ, र यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं यसलाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ!
कैरी अगस्त मा 4, 2018 मा 10: 00 एम
उत्कृष्ट लेख। के तपाइँसँग कुनै उदाहरणहरू, व्यायाम वा थप पठन छ?
पछिल्लोके मोरिंगा महिलामा यौन उत्तेजनालाई बढावा दिन्छ?
अर्कोके तपाईंले आफ्नो CV / पुन: शुरूमा तपाईंको ठेगाना राख्नु पर्छ?